CALAAMADSO: Waa Kuwee Siddeeda Kulan Ee Todobaadkan Ugu Xiisaha Badan UEFA Champions League Ee Aduunka Kubbada Cagta Sida Wayn Looga Sugayaa? - GOOL24.NET
CALAAMADSO: Waa Kuwee Siddeeda Kulan Ee Todobaadkan Ugu Xiisaha Badan UEFA Champions League Ee Aduunka Kubbada Cagta Sida Wayn Looga Sugayaa?
October 1, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha Yurub ee qaybta ka ah tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions league ayaa isku diyaarinaya kulamada labaad ee heerka Groupyada Champions League iyada oo la ciyaari doono kulamo kale oo xiiso badan. Kulamadii kowaad ee Champions league ayaa ahaa kuwo aad u xiiso badan gaar ahaan kulaamdii ay kooxaha waa wayni ciyaareen.
Kulamada labaad ee heerka Groupyada UEFA Champions league ayaa aad muhiim ugu noqon doona kooxihii aan soo guulaysan kulamadii kowaad si ay rajadooda wareega xidiga u sii ilaashadaan halka kuwii guulaystay ay isku dayi doonaan in ay talaabo kale u qaadaan wareega 16ka kooxood ee UEFA Champions league.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa siddeeda kulan ee ugu xiisaha badan UEFA Champions League ee todobaadkan laga ciyaari doono garoomada Yurub halkan ayaanad kaga bogankartaa.
8- Manchester United vs Valencia:
Manchester United oo xaalad qalalaase ah ku jirta ayaa soo dhawaynaysa kooxda aan iyaduba dhaamin ee Valencia waxayna labada kooxood iskaga hor iman doonaan kulan xiiso badan. Man United ayaa ku soo dhibtoonaysay kooxaha horyaalka La Liga iyada oo xili ciyaareedkii hore tartanka Champions League ay ka reebtay kooxda Sevilla.
Man United ayaa kulanka Valencia iskeeni doonta iyada oo guuldaro kala soo kulantay West Ham United isla markaana ay kooxda Mourinho ka hadhay EFL Cupka kulankii Derby County waxaana sidoo kale la dareemayaa khilaaf xadka goostay oo u dhexeeya Mourinho iyo ciyaartoy uu Paul Pogba xulafo la noqday.
Kooxda Valencia ayaan soo guulaysan lixdii kulan ee La liga ugu horeeyay waxayna ku jirtay xaalad musiibo ah laakiin kooxda Marcelino ayaa kulankii ugu danbeeyay guul ka gaadhay Real Sociedad si ay kalsooni ugu sii abuurato kulanka Man United.
Sidaa daraadeed, kulanka Man United iyo Valencia ayaa ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee natiijadiisa sida wayn loo sugi doono.
Eeg Min Bogga 2-aad ilaa 5 aad:
NiMaN YaHaW ZaQaJaaN Nimada Naga daaYa o Warka Caadi nooGuzo qora kuzi dHuFo Kuzi dHuFo Kuzi dHuFo waaxaY WaaBa na NacziizeN waXe 😡